I-sawfish, enye yezona ntlanzi zinqabileyo kwaye zinomdla kakhulu | Ngeentlanzi
Isarfish iphila ngokuvisisana negama layo. Umzimba wayo omde kunye nomlomo omile okwenziwe ngesaha kwenza le ntlanzi yoyikwe kakhulu. Igama lezenzululwazi ngu IPristis pristis kwaye yeyomyalelo wePristiformes. Kweli nqaku siza kuhlalutya nzulu le ntlanzi intle ukuze sifunde ngakumbi ngayo.
Ngaba uyafuna ukufunda zonke iimpawu kunye nendlela yobomi beesarfish?
4 Ukutyisa iSawfish
Intsapho ye-sawfish inezintlu ezimbini kunye neentlobo ezisixhenxe. Zininzi okanye zingaphantsi ezinxulumene nemivimbo kwaye zibonisa amathambo agcwele intlala. Olona phawu lubalulekileyo kwaye kwinto eyaziwayo kukuba i-muzzle iyafana nesarha. I-muzzle isongelwe kwinani elikhulu leepore ezivumela ukuba ikwazi ukubona nayiphi na intshukumo ukuze ikwazi ukuzingela. Oku kukunika ithuba elihle ebaleni.
Ubungakanani bemvakalelo yakhe bukhulu kakhulu kangangokuba iyakwazi ukubona ukubetha kwentliziyo kuso nasiphi na isilwanyana. Uninzi lwezinto ezenziwayo zenziwa ngenxa yomlomo kwimowudi yesarha. Ikhonza zombini ukuhlaselwa nokuzikhusela. Sisixhobo esilungeleleneyo esinokubamba ixhoba lokutya kwangoko. Isebenzisa yona ukuzikhusela kwizilwanyana ezifana nehlengethwa kunye nookrebe. Ayinamazinyo, kodwa izikali zamazinyo.
I-muzzle yenziwe ngamazinyo angama-23 amazinyo eziya ngaphambili. Inkulu kakhulu kangangokuba imele ngaphezu kwekota yomzimba wayo. Banokuya kumacala ahlukeneyo ukuhlasela ixhoba labo abalilimaze ngesarha. Igqunywe ngokupheleleyo kwimingxunya yeemvakalelo ezikunceda ubone yonke into ekujikelezileyo.
I-Sawfish inokuzingela ngeendlela ezimbini. Eyokuqala kukusebenzisa isicheme njengebrashi. Ngale ndlela, inokutsala isanti kwiindawo ezifihlekileyo ezinje ngee crustaceans, oononkala kunye ne shrimp. Inokuphinda ixinzelele ixhoba layo njengamacwecwe e-mullet kunye nezinye iisampulu. Nangona kunjalo, kulula ukuba lixhoba lookrebe xa bekwiminyaka yolutsha.
Njengoko bekhula, bayakwazi ukuzikhusela kwizilwanyana ezoyikekayo zolwandle.
I-sawfish sisilwanyana sasebusuku, bayazihlalela kwaye bachitha usuku lwabo bephumla ngoxolo ukuze basebenze ebusuku nasekuzingeleni. Nangona inkangeleko yazo inokubonakala iyingozi kwaye inyanzelisa uloyiko, ziintlanzi ezingenzi nto kwaye azinakho ukuhlasela abantu. Nangona kunjalo, njengeentlobo ezininzi, ukuba iyasongelwa okanye ihlaselwe, ayizukuthandabuza ukuzikhusela.
Sisilwanyana esihleli kakuhle esichitha ixesha laso lokuphumla kwiindawo ezizolileyo. Ihlala ibekwe kufutshane nomhlaba onesanti apho inokufumana ixhoba phantsi kwesanti. Njengazo zonke iintlobo zazo, ii-batoid elasmobranchs zinokuphefumla zisebenzisa imijikelezo emikhulu enayo kwiliso ngalinye.
Singayifumana iSawfish kwitropiki nakwindawo ezitshisayo. Iyafumaneka kwiindawo zase-Australia, e-Afrika, e-Ecuador, ePortugal nakwezinye iindawo zeCaribbean. Abakhenkethi bayayibona njengoko behlala kumanzi anzulu.
Iyakwazi ukuhlala emanzini amatsha anetyuwa. Zibekwa ikakhulu emilonyeni yemilambo apho umahluko wamanzi amatsha netyuwa ungagxininisi imetabolism. Enkosi kubushushu beentlanzi ezikwaziyo ukusebenza kwiindawo ezihlala emanzini. Banokuhlala kwiindawo ezibabonelela ngokutya kunye noxolo lokuphumla emini.
Banokufumaneka kwezinye amachweba kunye neebheyi apho ahlala khona kungekho ngxaki. Isungulwe ecaleni kweGulf yaseMexico emazantsi ngeAtlantic nasePacific. Kwezinye iindawo isetyenziswa njengeyeza elingezinye kwizifo zokuphefumla.
Kuba ixesha lakhe elininzi ulichitha kwiindawo ezinodaka nakwisanti, uthatha ithuba lokumba nokuzonwabisa. Ukwenza oku usebenzisa isarha yakhe kwaye kumaxesha amaninzi ugqibela ngokufumana ixhoba onokondla ngalo. Kuyathakazelisa ukuba abonwe esenza eli nyathelo ukuze aziphazamise xa kusihlwa.
Ixhoba elilula kakhulu elinalo ziintlanzi ezikweleenjiko, kuba azinayo inkqubo efanelekileyo yokuzikhusela. Ukuhanjiswa kwale ntlanzi kugxile kwiindawo apho ngaphambili bezihlala zininzi. Banokufumaneka emanzini aseMelika, ngakumbi kulawa aseNew York, eFlorida naseTexas.
Ukutya kwabo kusekwe kwii-invertebrates ezinkulu kunye nee-mollusks. Ukongeza, itya nezinye izinto eziphilayo ezifumaneka kubunzulu bamanzi. Naxa besabelana ngendawo yokuhlala enye kwaye iSawfish inamandla okuyitya, akuzange kubonwe ukuba itye iintlanzi zamatye.
Xa ufuna ukubamba le ntlanzi, ayinangxaki. Nangona kunjalo, ayityiwa njengezinye iintlobo zentlanzi. Okwangoku kukho urhwebo ngeesarfish kunye nokuthumela ngaphandle okukhoyo.
Ngokubanzi, ukusetyenziswa kwale ntlanzi kwenziwa ityuwa kwaye phantse kuhlala kubanjwa ngokuloba i-shrimp. Ubungakanani obukhulu abufumaneki kuba ayisiyiyo eyona nto iphambili ekulobeni. Iqulethe izixa ezikhulu mercury, ngoko ayikhuthazwa ukuba idle ngemilinganiselo emikhulu. Esi sizathu sokuba ingazange idume kakhulu kwi-gastronomy yamazwe.
Akukho nto ingako eyaziwayo malunga nokuzala kwakhona kwesarfish. Into eyaziwayo kukuba ziyi-ovoviviparous, ke ngoko ukuzala kwazo kweqanda kukhula ngaphakathi kowasetyhini kude kube ngumzuzu wokuqandusela. Xa befikelela kubudala obumalunga neminyaka eli-10 kuxa befikelela kubudala obupheleleyo. Ukuba ababanjwanga ngamarhamncwa abo okanye ngabantu, ihlala inexesha lokuphila iminyaka engama-30.
Ukufikelela ekuvuthweni ngokwesondo kufuneka babe malunga neemitha ezine ubude kunye ne-10 leminyaka ubudala. Ukuveliswa kwakhona akuninzi kakhulu, okwenza ukuba kube sesichengeni sokuloba kakhulu. Inqanaba lokuzala kwakhona kwale sawfish liphantsi kakhulu kwaye linokuthelekiswa ne iseyilefish okanye u-marlin onenkqubo ecothayo yokuzala
Ukuzaliswa kwakhona kwenzeka iinyanga zika-Epreli ukuya ekupheleni kukaJuni.
Ngolu lwazi unokufunda ngakumbi nge-sawfish. Ingaba uyithandile? Masiyazi ngezimvo 🙂
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » ISawfish